नयाँ घर प्यारो पुरानो झन् प्यारो | Nagarik News - Nepal Republic Media
नयाँ घर प्यारो पुरानो झन् प्यारो
२७ जेष्ठ २०७४ १३ मिनेट पाठ
कलाकार किरण केसी ललितपुर, इमाडोलका रैथाने हुन् । यहाँ उनको ठूलो कम्पाउन्डसहितको साढे दुईतले घर छ । उनका निम्ति संसारको सबैभन्दा महान् आनन्द कामबाट फर्केर श्रीमतीलाई सम्बोधन गर्दै घरभित्र छिर्नु हो । भन्छन्, ‘हरेक पटक घर छिर्दा ‘सीता’ भन्दै बोलाउँदै छिर्छु । उनको नाम लिँदै घरभित्र छिर्नु जस्तो विशाल आनन्द अरू केहीमा लाग्दैन ।’
उनले यो घर २०/२२ वर्षअघि बनाएका हुन् । त्यतिबेला उनको घर बनाउने श्रमिकमध्ये दुई जनालाई उनी अहिले पनि सम्झिरहन्छन् । ‘एक जना कीर्तिपुरतिरका डकर्मी थिए,’ उनी सम्झन्छन्, ‘अग्ला थिए । मान्छे साह्रै सीधा । खुरुखुरु काम गर्थे । अर्का एक जना ज्यामी थिए, मानबहादुर भन्ने । उनीहरू दुई जनाले आफ्नै घर सम्झेर काम गरे । उनीहरू दुवैको जय होस् !’
डिंगो बुटले थपिदिएको तला
२०४८ सालमा छोरी सुषमाको हातबाट घरको शिलान्यास भयो । सुरुमा एकतलाको मात्र घर बनाउने सोच थियो । भन्छन्, ‘आफ्नै इँटाभट्टा थियो । सय मुरीभन्दा बढी धान बेच्थ्यौँ । गहुँ, मकै ५०/६० मुरी हुन्थ्यो । त्यो बेलामा हङकङ र ब्यांककबाट विभिन्न समान ल्याएर बेच्ने काम पनि गर्थें । ब्यांकक दुई सय र हङकङ ६० पटकभन्दा बढी गएको छु ।’
किरण लाउनखानका सोखिन थिए । ‘त्यो जमानामा आठ हजारको डिंगो बुट लगाउँथेँ,’ उनी सम्झन्छन्, ‘घर भर्खरै ढलान भएको थियो । एक दिन ढलानमा पाइपले पानी हाल्दै थिएँ, मनमा कुरा खेल्यो । ओहो, जुत्ता आठ हजारको लाउने, घर भने एक तलाको मात्रै बनाउने ? भन्ने लाग्यो ।’
किरण लाउनखानका सोखिन थिए । २०४८ सालतिर आठ हजार रुपैयाँ पर्ने डिंगो बुट लगाउँथे । एक तलाको मात्रै घर बनाउने तयारीमा रहेका उनले सोचे– ‘जुत्ता आठ हजारको लाउने, घर चाहिँ एक तला मात्रै बनाउने ?’
डिंगो जुत्ताले तला थप्न प्रेरित गरेको उनी बताउँछन् । ‘इँटालाई पैसा पर्दैनथ्यो, ज्याला हाले पुग्थ्यो,’ किरण स्मरण गर्छन्, ‘यस्तो अवसर घरीघरी आउँदैन भनेर त्यही जुत्ताले अर्को तला थप्न प्रेरित गर्यो । हुँदाहुँदै तीन तलाको घर ठड्याइयो ।’
उनको घर चार रोपनी कम्पाउन्डभित्र छ । घरपछाडि ठूलो बगैँचा पनि छ ।
पुरानै घर प्यारो
आर्मीका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल दुर्गाबहादुर र इन्द्रकुमारीका १३ जना सन्तानमा किरण कान्छा हुन् । अहिले बस्ने घरभन्दा करिब दुई सय मिटर पर एउटा पुरानो घर छ । ‘२०१४ सालमा बुबाआमाको सुखदुःख त्यो घरमा म जन्मिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई त्यो पुरानै घर प्यारो छ । कान्छो छोरा भएकाले बुबाआमा मसँगै बस्नुहुन्थ्यो । पछि उहाँहरूले त्यो घर मेरै नाममा गरिदिनुभयो ।’ त्यही घरमा उनको सीतासँग बिहे भयो, दुई छोरा सुदीप, सुदन र छोरी सुषमा त्यही घरमा जन्मिए । ‘मेरा जिन्दगीका खुशीका ठूलठूला पल त्यही घरभित्र छन्,’ किरण भन्छन् ।
२०३८ सालमा किरण र उनका दाइ सुन्दर मिलेर बिके चिम्नी इँटाभट्टा खोले । इँटाभट्टा खोलेको लगभग १० वर्षपछि उनलाई एउटा घर बनाउनुपर्यो भन्ने सोच आयो । ‘पुरानो घर साँघुरो थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘ट्वाइलेट पनि घुमेर निस्कनुपथ्र्यो । छोराछोरी हुर्कंदै गए । पुरानो घर भएको कम्पाउन्डमा आमाले घर बनाउन दिनुभएन । ‘जग्गा छँदै छ, अलि टाढा बना’ भन्नुभयो ।’
कलाकारिता, इँटाभट्टा र घरपरिवार सबैको जिम्मेवारी किरणको काँधमा थियो । ‘यो घर बनाउन मैले २५ प्रतिशत काम गरेँ होला, बाँकी ७५ प्रतिशत देन सीताकै छ ।’
घर बनिरहेकै बेला कामको सिलसिलामा उनी तीन महिनाका लागि जापान गए । घरको प्लास्टर मात्रै भएको थियो, रङरोगन भएको थिएन । ‘५१ सालको कुरा हो, म उताबाट फर्केर आउँदा ७०/८० हजार रुपैयाँ बराबरका धारा र ट्वाइलेटका सामानहरू चोरी भए,’ किरण सम्झन्छन् ।
त्यही साल उनीहरूले घर सर्ने निर्णय गरे । तर, आमाले पुरानो घर छोड्न मानिनन् । ‘४८ सालमा बुबा बित्नुभयो,’ किरण विगत सम्झन्छन्, ‘आमा मसँगै बस्नुहुन्थ्यो । नयाँ घरमा जाऊँ भन्दा मान्दै मान्नुभएन । ‘तैँले पाको हो मलाई ?’ भन्नुहुन्थ्यो । कर्नेली बुढी साह्रै कडा ! ‘म भित्रिएको घर हो यो, म जान्नँ’ भन्नुभयो । ८५ वर्षकी बुढी आमालाई एक्लै छाडेर कसरी घर सर्नु ? मन मान्दै मानेन ।’
एक दिन आमाले ‘लँ हिड म जान्छु’ भनेपछि किरणले नयाँ घरमा पूजा लगाए । ‘पूजा सकियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘पाहुनाहरू घर फर्किए । त्यही बेलुका आमाले ‘बाबु, त्यो घर छोड्नुहुन्न, हेर, हाम्रा सन्तान सप्रेको त्यही घरले गर्दा हो’ भन्न थाल्नुभयो । जति सम्झाउँदा पनि मान्नुभएन । अन्त्यमा केही सीप नलागेर आमाका लागि दुई जना सहयोगीको व्यवस्था गरिदिएँ । दिउँसो आमालाई हामीले कहिल्यै एक्लै छाडेनौँ । राति चाहिँ एक्लै उता घरमा सुत्नुहुन्थ्यो । मलाई रातभर पाप गरेँ कि भनेर डाह हुन्थ्यो । ९४ वर्षको उमेरमा उहाँको निधन भयो ।’
आफूले बनाएको घरको भन्दा उनलाई पुरानै घरको माया बढी लाग्छ । भन्छन्, ‘दुःखले बनाएको हुनाले नयाँ घरको माया लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले पनि योभन्दा त्यही आमाकै घर प्यारो लाग्छ ।’ आजकल उनी हरेक दिन बिहान त्यो घरमा गएर पानी चढाउँछन् । धूप बाल्छन् । ‘बुबाले दिदी र दाइ सबैलाई गरी चार वटा घर बनाइदिनुभएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘सबै भत्किए । त्यही आमाको घर बाँकी छ ।’ त्यो घर अहिले उनले संरक्षण गरेर राखेका छन् । नेवारी रेस्टुरेन्टलाई भाडामा दिएका छन् ।
अहिले उनी बसेको घरमा ११ ओटा कोठा छन् । तल्लो तलामा बैठक, दुइटा किचेन र धर्मछोरा वसन्तको कोठा छ । माथिल्लो तलामा उनको बेडरुम, लुगाफाटा राख्ने कोठा, नातिनीको कोठा र पाहुना कोठा छ । तेस्रोमा कान्छो छोराको बेडरुम । एउटा स्टोर र अर्को पूजाकोठा छ ।
सम्मानपत्र तथा पुरस्कार बैठककोठामा अटाइनअटाइ छन् । किरण यिनलाई आफ्नो असली सम्पत्ति ठान्छन् । ‘यसका लागि अब अर्को घर छुट्टै घर बनाउनुपर्ने भाको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सम्मानहरू मलाई ‘ए रातामकै ला’ भनेर दिएको हैन । स्टेजमा बोलाएर हजारौँ मान्छेका बीचमा दिइएका हुन् । मेरो जिन्दगीको कमाइ भन्नु नै यिनै हुन् ।’
सम्मानपत्र र पुरस्कारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपराध गरेजस्तो उनलाई लागेको छ । ‘एक डेढ वर्षपछि यिनका लागि छुट्टै घर बनाउँछु,’ उनको योजना छ, ‘दर्शकको मायाका कारण प्राप्त भएका यी सम्मानपत्रहरूको उचित संरक्षण गर्नु मेरो दायित्व हो ।’
किरणकी श्रीमती सीतालाई बगँैचाको ठूलो सोख छ । उनीहरूले बगैँचाकै लागि भनेर डेढ रोपनी जग्गा छुट्याएका छन् । बगैँचाको रेखदेश गर्न एक जना माली पनि छन् । बगैँचा भव्य छ । भुइँमा हरियो दुबैदुबो छ भने रंगीचंगी फूलका बोटबिरुवा प्रशस्छ छन् । ‘बगैँचामा बस्दा दुनियाँभरका दुःख र तनाव भुलिन्छ,’ किरण भन्छन् ।
पैतृक सम्पत्ति र आफूले जोडेको गरी इमाडोलमा १८ र चितवनमा सात रोपनी जग्गा छ, किरणको । ‘सबै जग्गा छोराछोरी र श्रीमतीका नाममा भागबन्डा गर्दिसकेँ,’ उनी भन्छन् ।
हास्य टेलिसिरियल ‘जिरे खुर्सानी’मा किरणले निर्वाह गरेको पात्र ‘राता मकै’ निकै लोकप्रिय छ । इमाडोलमा अहिले ‘राता मकै चोक’ नै छ । ‘राता मकै चोक भनेर नामाकरण गरेको सात/आठ वर्ष भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँका चालक र सहचालकले त्यस्तो नाम राखिदिएछन् ।’
किरण समाजसेवी पनि हुन् । भन्छन् ‘इमाडोलमा २९ लाख बराबरको तीनतले प्रहरी भवन बनाएर दिएँ । बाटो, पानी ट्यांकी, इनार, धारा, स्कुलका लागि पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिरहेकै छु ।’
रङ फेरिरहने घर
किरण आफ्नो घरको रङ फेरिरहन्छन् । ‘पहिले क्रिम, सिमेन्टी र सेतो फिक्का खालका रङहरू मन पर्ने भएकाले त्यस्तै रङहरू लगाएँ,’ किरण भन्छन्, ‘अहिले भने आफ्नै राशिकोे हरियो र निलो रङ बढी प्रयोग गरेको छु । त्यसबाहेक सुन्तला र सुगा रङ पनि ठाउँठाउँमा लगाएको छु ।’
उनको बैठक, बेडरुम, किचेनका भित्ता विभिन्न रङका वालपेपरले सजिएका छन् । ‘४० वटाभन्दा बढी देश घुमेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँका घरका भित्ताहरू वालपेपरले सजिएको देखेपछि मलाई पनि रहर लाग्यो ।’ बैठकमा भएको क्रिम कलरको लक्जरी सोफाले उनको घरको शान बढाएको छ ।
आफूले दुःख गरेर बनाएकाले उनलाई नयाँ घर प्यारो छ तर आफू जन्मेको, आमाको पुरानो घर झन् प्यारो छ । हरेक दिन बिहान उनी त्यो घरमा गएर पानी चढाउँछन् । धूप बाल्छन् ।
घरको भान्छा युरोपेली शैलीको भएको किरण बताउँछन् । भन्छन्, ‘किचेन बनाउन मात्रै सात लाख रुपैयाँ लाग्यो ।’
किरणले कहिलेकाहीँ भान्छाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सीता बताउँछिन् । ‘उहाँ खसीको मासु साह्रै मीठो पकाउनुहुन्छ,’ सीता उनको पाक्कलाको तारिफ गर्छिन् ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७४ १३:३८ शनिबार
घर प्यारो पुरानो झन् प्यारो